Ajụjụ - WoopShop ®
Kedu esi achọta ngwaahịa?
Ị nwere ike ịchọ ngwaahịa site na ịbanye aha ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu n'ime ogwe nchọpụta n'elu nke ibe. Gbalịa itinye nkọwa zuru ezu. Ntinye okwu ndi ozo i jiri, ihe ole na ole i ga enweta na peeji nke. Ị nwere ike ịhọrọ otu udi iji chọọ.
Kedu ka esi kwụọ ụgwọ ego mbupu?
Anyị na WoopSop nye mba ndị mba ọzọ onyinye zuru oke na ngwaahịa niile, woop woop!
Gịnị bụ Asịwo Nchedo?
Nchekwa Buyer bụ ihe nnyefe nke na-enye ndị ahịa aka ịzụ ahịa na obi ike na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Ị na-echebe mgbe:
Ihe ị nyere iwu adịghị abịa n'oge a kwere nkwa.
The item unu natara adịghị dị ka a kọwara.
The item unu natara na e mesiri obi ike ịbụ ezi ndị bụ adịgboroja.